Account ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေး | သုံးစွဲသူလက်စွဲ
သင်သည်သင်၏ Master Password ကိုမေ့လျော့ကြပြီဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားမှအောက်ပါအဆင့်တွေအတိုင်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်. LastPass များအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူသင်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ကြပေမည်အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး – ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝှက်စနစ်နည်းပညာကြောင့်, LastPass မာစတာစကားဝှက်ကိုမသိရပါဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတက်စေ့မကြည့်နိုင်ပါတယ်, သင်ကစေလွှတ်မည်, ဒါမှမဟုတ်သင်အဘို့ကို reset. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလုံလုံခြုံခြုံနေဆဲဆိုလိုတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့် Master Password ကိုမေ့လျော့ကြသောအခါကန့်သတ်ရွေးချယ်မှုများရှိကြောင်းကိုဆိုလိုသည်.
သင် LastPass သို့ logging အခက်အခဲရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီး:
မှာ LastPass ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် login မှကြိုးပမ်းမှု www.lastpass.com နှင့် browser မှတစ်ဆင့် add-on အတွက် မည်သည့် အပေါ်ကို browser မည်သည့် ရရှိနိုင်သောကွန်ပျူတာ. သင် website ကိုကနေတဆင့်မဟုတ်ဘဲ plugin ကိုကနေတဆင့် Login လုပ်ဖို့နိုင်လျှင်, တကွန်ပျူတာပေါ်မှာ login နိုင်ကြသည်မဟုတ်အခြားသို့မဟုတ်, ဒီအလားအလာ LastPass ကို browser add-on နဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သင့် browser cache ကိုရှင်းလင်းရေးကြိုးစားသင့်သောကိစ္စများတွင်, ပြီးနောက် ထိုပြဿနာကိုသတင်းပို့ ကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်.
သင်က website ကနေတစ်ဆင့် login မနိုင်လျှင်, သင့်ရဲ့စစ်ဆေး စကားဝှက်သဲလွန်စ (https://lastpass.com/forgot.phpသင်သည်သင်၏ LastPass အကောင့်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်) ကိုသင်တို့အား setup ကို. စကားဝှက်ကိုအရိပ်အယောင်ဖြစ်သည် မဟုတ် သင့်ရဲ့ Master Password ကို.
စကားဝှက်ကိုအရိပ်အမြွက်သင့်ကိုကူညီမပါဘူးဆိုရင်, အကိုသွား Account ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစာမျက်နှာ (https://lastpass.com/recover.php) သင်၏ဒေသခံ One Time Password ကိုသက်ဝင်စေဖို့အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာသင့်အကောင့်ကို recover လုပ်ဖို့. LastPass သင့်ရဲ့ browser မှာဖွင့်ရန် link တစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်. သင်က link ကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားသောပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံး browser ကိုအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ LastPass အကောင့်ကိုယခင်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးသောပေါ်ရှိမည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုအခြား browser ကိုအပေါ်တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြိုးစား. Please note that this can only be attempted fromadesktop – mobile devices and apps are not supported for account recovery.
ဤအဆင့်၌ရှိသမျှမအောင်မြင်သောဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ Master Password ကိုမကြာသေးမီကပြောင်းလဲသွားပြီးပြီဆိုရင်, သင်ကြိုးစားနိုင်ပါ သင့်ရဲ့သိမ်းချင်တာတွေသိမ်းတဲ့အရင်ဗားရှင်းကိုပြန် reverting (https://lastpass.com/revert.php). ဒါကနောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သင့်, သင်ပြောင်းလဲသွားတယ်သို့မဟုတ်ထည့်သမျှဒေတာဆုံးရှုံးသွားမှာအဖြစ် backup အမျိုးအစားရက်စွဲကတည်းက.
ဤအချက်မှာသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမှတ်မိဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြလျှင်, သင့်ရဲ့အရိပ်အယောင်သင့်မှတ်ဥာဏ် jog ဘဲ, သင်သို့ logged င်တိုင်းစက်ပေါ်တွင်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပြန်လည်ကုဖို့ဖြစ်တယ် သင့်အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ပါ and start over.
သင့်အနေဖြင့် LastPass Icon ဟာ menu ကနေ Preferences ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ယခုမသန်စွမ်းသူတစ် One Time Password ကိုကယ်ဖို့မရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, Advanced tab ကို (LastPass Icon ဟာရွေးချယ်ခြင်း > Preferences ကို > Advanced tab ကို). ခင်ဗျားကဒေသန္တရ OTP ကို​​ disable လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုအရိပ်အယောင်မကူညီဘူးဆိုရင်သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပြန်လည်ကုသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတစ်ကနေပြန်စဖို့ရန်ဖြစ်သည်. သင်တဦးတည်းဖန်တီးပြီးတဲ့အခါ preference ကို disable လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်, က LastPass ကိုချွတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ One Time Password ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်’ server များ.
အားလုံး One Time Passwords များကိုအတူအမျှ, LastPass သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမခံနိုင်သည် ဖြစ်. , အကယ်. သင့်ရဲ့အကောင့်ကို recover ရန်အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်နေတဲ့ PC ပေါ်မှာဖြစ်ရမည်, တစ်ဦး One Time Password ကို၏ကိုကျပန်းနံပါတ်ကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းထားကြောင်းကို၎င်းကွန်ပျူတာ၏ထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက.
Save your changes with the “Update” ကြယ်သီး.
Recovery ကို OTPs vs ဝင်မည် OTPs
Login OTPs can be generated on this page: https://lastpass.com/otp.php ပြီးသူတို့ “တစ်ကြိမ်နဲ့ passwords” သင်ပယ် print သင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း. စာရင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအချိန် password ကိုထို့နောက် LastPass ကနေတဆင့် Login လုပ်ဖို့သုံးနိုင်မည် https://lastpass.com/otp.php – အိုင်ဒီယာသင်စိတ်မချရတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆိုရင်ခြင်းဖြစ်သည်, သောကြောင့်, keylogger တွေရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုသင့်ရဲ့ Master Password ကိုရိုက်ထည့်ချင်ကြဘူး, သင်က OTP ကို​​သုံးနိုင်သည်. ကိုအသုံးပြုရန်ပြီးနောက်ဒါဟာကုန်ဆုံးပြီးနောက်, သင်မူကား, Master Password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းမရှိဘဲ login မှခွင့်ပြု. ဤခရီးဆောင်များမှာ, သူတို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ရှိရာစက်ကိရိယာမှဒေသခံမဟုတ်. သင်မှာ login သည့်အခါစာရင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် https://lastpass.com/otp.php သင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံနှိပ်ပိုမိုနိုင်သောနေရာ. သူတို့ကအကောင့်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အသုံးပြုစေကြသည်မဟုတ်.
Users do not have direct access to OTPs. ဒီ add-on ကို browser ကအလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များ၏-bits ရှိပါတယ်. သင်အသုံးပြုသည့်အခါ LastPass ကို browser add-on, ဤ OTP နှင့် browser ထဲတွင်စတိုးဆိုင်ကထုတ်ပေးပြီး. သင်အကောင့်ကို Recovery ကိုဖြတ်သန်းသွားသည့်တိုင်အောင်၎င်းသည် OTP ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သိုလှောင်ထားခဲ့ပါသည်ရှိရာတိကျသော browser မှာရှိနေမည်. သင်ကဆယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြုလျှင် (https://lastpass.com/recover.php), ကဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် “တက်ကိုပဌနာ” OTP ကြောင်း, ထိုသို့ OTP ကို​​ browser ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့သည်ကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်လျှင်သင်ချက်ချင်းသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို reset ခွင့်ပြု. OTPs သီးခြား browser များမှဒေသခံများမှာ, နှင့်တဦးချင်းစီ OTP ကို​​ browser အတွက်ထုတ်လုပ်ထားရမည်, တစ်ခုချင်းစီ computer ပေါ်မှာ, သင် LastPass ကိုအသုံးပြုဖို့အဘယ်မှာရှိ. ဆယ်တင်ရေး OTPs ခရီးဆောင်မဟုတ်, သူတို့ကသီးခြား browser ရဲ့ file ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသည်, ဒါကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူအောင်သင်တို့ရှေ့၌သင့် LastPass အကောင့်ကိုသုံးခဲ့ကြတည်ရှိတဲ့နေရာက browser ပေါ်မှာသာပြုနိုင်ပါသည်. ဝင်မည် OTPs လိုပဲ, သော်လည်း, တစ်ချိန်ကသူတို့အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးနောက်ပြန်လည်နာလန်ထူ OTPs သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမှာ. သင်သည်သင်၏ Master Password ကို reset င်နောက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသောအခါသင်သည်လာမည့်ရဲ့ login, အသစ် OTPs ကို browser အတွက်ထုတ်လုပ်နေကြတယ်.